Wararka Maanta: Arbaco, Feb 10, 2010-Dowladda Soomaaliya oo shaacisay magaca Sarkaal Ajnabi ah oo ay sheegtay in ay ku dishay magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay magaca Sarkaal Ajnabi ah oo ay sheegtay in ay ku dishay magaalada Muqdisho. Arbaco, Feb, 10, 2010 (HOL) Dowladda Soomaaliya oo dhawaan sheegtay in ay magaalada Muqdisho ku dishay Sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxaha ka soo horjeeda gaar ahaan Xarrakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa markii ugu horeysay shaacisay magaca Shaqsiga la dilay iyo darjadiisa. Idaacada VOA- oo soo xiganeysa qaar ka mid ah Wakaaladaha wararka ayaa waxaa ay sheegtay in magaca shaqsiga Ajnabiga ah ee la dilay sida ay Dowladdu sheegtay uu yahay Camar Ibraahim oo kooxaha Islaamiyiinta ah ugu jiray ayeey tiri kaalintii uu u hayay Saalax Cali Nabhaan oo sanadkii hore lagu dilay duqeyn cirka xili gaari uu la socday uu marayay deegaan ka tirsan Goballka Shabeelaha hoose. Dowladdu waxaa ay intaa ku dartay in shaqsiga la dilay ee Ajnabiga ah uu marqaati u noqonayo xiriirka aan leex leexadka laheyn ee kooxaha mucaaradku la leeyihiin sida ay Dowladdu hadalka u dhigtay Ururka Al-qaacida . Laakiin warka ku saabsan in Dowladdu toogasho ku dishay shaqsi Ajnabi ah oo ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta waxaa iska fogeeyay Af-hayeen Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Shiikh Cali Max'uud Raage (Shiikh Cali dheere) o sheegay in warkaasi yahay mid sal iyo raadi toona laheyn. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay ku eedeysaa kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka dagaallama gudaha dalka Soomaaliya in ay gacan ka helaan dagaal yahano Ajnabi ah, halka kooxaha Islaamiyiinta ah dhinacooda ku eedeeyaan Dowladda in ay kaashaneyso Ciidamo Ajnabi ah oo ka soo horjeeda diinta Islaamka. C/raxmaan Diini, Hiiraan Onlinediini@hiiraan.com
Arbaco, Feb, 10, 2010 (HOL) Shiikh C/llaahi Cali Barkhadlle oo ka mid ah Culimada waa weyn ee Dariiqada Suufiyada ayaa waxba kama jiraa ku tilmaamay Wareysi BBC-du la yeelatay mid ka mid ah mas'uuliyiinta Ahlu Sunna Waljameeca oo sheegay in Shiikh C/llaahi Cali Barkhadlle yahay Wakiilka Ahlu Sunna ee Goballka Hiiraan. Dagaal dhexmaray ciidamo booliis iyo Mileteri ah oo ka wada tirsan Dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay 2/10/2010 7:44 AM EST
Arbaco 10, Feb, 2010 (HOL) Dagaal u dhexeeyay ciidamada kawada tirsan Dowladda Soomaaliya oo ka dhacay Iskool Bolisiyo ayaa sababay inay dhintaan ugu yaraan 3-askari, ayna ku dhaawacmeen saddex kale. Waxgaradka Gobolka Sh/Hoose oo dowladda Soomaaliya ka dalbaday inaysan gobolkaas u magacaabin cid aysan raalli ka ahayn 2/10/2010 7:44 AM EST
Arbaco 10, Feb, 2010 (HOL) Ciidamo ka tirsan kuwa Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay gaaray Magaalada Muqdisho, kuwaasoo la sheegay inay ka tageen gobollada Koonfureed. Guddida Dhaqaalaha Golaha Wakiilada Somaliland oo eedayn u jeediyay Wasiir Xukuumadda ka tirsan 2/10/2010 2:27 AM EST